နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Proxy for NO Proxy!!!
Proxy for NO Proxy!!!
Copy From: SB.Sangpi(စံပီး)
ကိုဖွင်.ပါ ... ပွင်.ပြီဆိုရင် ( URL ဆိုတဲ. textbox ထဲမှာ ) ကိုယ်ကြည်.ချင်တဲ. ၀က်ဆိုက်ဒ် ကို ရိုက်ထည်. လိုက်ပါ ...ပြီးရင်တော. Submit လုပ်လိုက်ပါ ... ခဏ ကြာရင် Crawler ဆိုတဲ့ အတန်းမှာ အနီရောင်နဲ့ Click here to view the page as Googlebot-2.1
page ဆိုပြီးပေါ် လာပါလိမ်.မယ် ...အဲဒါကို နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ရုံပါဘဲ ... မြန်လည်းမြန် ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ် ...
ဆိုတော. သူငယ်ချင်းတို.ဘက်ကစည်းကမ်းရှိရှိလေး သုံးပေးဖို.တော. မေတ္တာ ရပ်ခံပါတယ် ... ကိုယ်စီအသိစိတ်လေး နဲ.သုံးပေးပါ ... ဒီလိုဆိုရင်ဖြင်. ကြာကြာသုံး နိုင်.ပါလိမ်.မယ် ... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
နည်းလမ်းလေးက လွယ်လွယ်လေးပါ သုံးကြည့်ပါ အဆင်ပြေ ပါစေနော်။
Posted by P Kyaw Swa at 10:01 PM